Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Ki-Jana Hoever Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Ki-Jana Hoever Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ Onwe, Ndụ na Net Worth.
Na nkenke, Lifebogger na-enye gị akụkọ ihe mere eme nke otu nwa amaala Dutch mara mma nke si Amsterdam bịa. Akụkọ anyị malitere site na mgbe Ki ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na egwuregwu mara mma.
Iji kpalie agụụ nke autobiography gị na ọdịdị nke Ki-Jana Hoever's Bio, lee nchịkọta ihe atụ nke njem ndụ ya. Obi abụọ adịghị ya, ọ na-akọ Akụkọ ya.
Ihe omuma nke Ki-Jana Hoever. Lee ndụ nwata ya na mbili ya.
Ee, mụ na gị maara na kpakpando Dutch enwetawo ihe niile dịka Jules Kounde. Site na mma ya mara mma ile anya n'egwuregwu ya. Ka a sịkwa ihe mere o ji soro Egwuregwu bọọlụ gbara afọ iri na isii.
N'agbanyeghị nkwanye ugwu ahụ, anyị achọpụtala na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-ahụ egwuregwu bọọlụ hụrụ ụdị miri emi nke Bio. Lifebogger akwadebela ya, naanị maka gị na maka ịhụnanya maka egwuregwu ahụ. N’atufughi oge, ka anyị gaa n’ihu.
Ki-Jana Hoever Nwatakiri Akuko:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha "Ki". Ki-Jana Delano Hoever mụrụ na 18th nke Jenụwarị 2002 na nne ya Marianne Hoever, na nna, Ivan Hoever, n'obodo Amsterdam, isi obodo Netherlands.
Mgbe a mụrụ ya, nne na nna ya kpọrọ ya aha Ki-Jana Carter-agwa egwuregwu US.
Foto dị n'okpuru, Carter bụ onye egwuregwu bọọlụ America lara ezumike nka onye nna Ki-Jana Hoever (Ivan) nwere oke nkwanye ugwu. N'ihi oke ịhụnanya o nwere n'ebe nwoke a nọ, o kpebiri ịsọpụrụ ya site n'ime ka nwa ya gụọ aha ya.
Nne na nna Ki-Jana Hoever gụrụ nwa ha nwoke aha ndị America a.
Maka ebumnuche doro anya, a mụrụ Carter, onye egwuregwu bọọlụ America na Westerville, Ohio, United States. Ọ nwere aha zuru oke Kenneth Leonard Carter.
Isi ihe ị ga-ahụ: “Ki-Jana” bụ aha otutu ya abụghị akụkụ nke ezigbo aha ya. N'ụzọ dị ịtụnanya, Carter nwetara aha otutu a site na agwa dị na fim akpọrọ 'Shaft in Africa'.
Nke a bụ ebe aha ya "Ki-Jana" sitere.
A mụrụ Little Ki-Jana ka ọ bụ naanị nwa nna ya (Ivan) na mama (Marianne) mụrụ. Onye na -agbachitere nọrọ afọ ndị mbụ ya na mpaghara Amsterdam nke Pieter Lodewijk Takstraat. N'ebe ahụ, o nwere ụfọdụ ihe ncheta bọọlụ na -atọ ụtọ - akara nke obi ụtọ nwata.
Ọ bụrụ na ịmaghị, ebe Ki-Jana toro bụ naanị okwute na Johan Cruijff ArenA.
Nke a bụ ámá egwuregwu bọọlụ Ajax. Ihe akaebe maapụ na-ekpughe-na ámá egwuregwu ahụ bụ naanị nkeji iri site na ebe ezinụlọ Hoever bi.
N'oge ahụ, dị ka nwatakịrị, obere Ki-Jana ga-anọ n'ụlọ ezinụlọ ya ebe ọ na-anụ mkpọtụ mkpọtụ nke ndị na-akwado Ajax ka ha na-agba ara maka ndị otu ha.
Ọ bụ ezigbo Euphoria. Nwa nwoke amaghi - na ihe di otua gha enwe oke na aka ya nke ibu ndi oka egwu.
Ki-Jana Hoever Ezinụlọ:
Onye egwuregwu bọọlụ Dutch sitere na ezinụlọ egwuregwu. Ị maara?… Otu n'ime nne na nna Ki-Jana Hoever-nna ya, Ivan-bụbu onye egwuregwu bọọlụ America.
Ka a sịkwa ihe mere enwere njikọ na Ki-Jana Carter-nwoke ahụ Ivan kpọrọ nwa ya aha.
Eziokwu ahụ bụ na nna ya bụbu onye egwuregwu bọọlụ America na -egosi na ezinụlọ ya ga -enwerịrị - otu oge biri na United States of America.
Site n'ihe anyị maara, Marianne na Ivan hapụrụ US gaa Netherlands - ebe ha nwere Ki - nwa ha nwoke.
Mụ na gị maara na amụrụ ya na Amsterdam, Netherlands. Mana n'ihe gbasara mgbọrọgwụ ezinụlọ, starlet Dutch bụ nke Surinamese.
Otu ihe ị ga -arịba ama, ndị Surinamese sitere na obodo a na -akpọ Suriname. Ha dị n'otu ma mara maka ọmarịcha agba akpụkpọ anụ Mulatto agwakọtara.
Ndị Surinamese dị n'otu ma mara mma. O juru anyị anya na ọmarịcha mma Virgil van Dijk na Ki-Jana Hoever
Dị ka e si hụ na maapụ, nke a bụ obere obodo dị n'ụsọ oké osimiri ugwu ọwụwa anyanwụ nke South America.
Ki-Jana so na ndị egwuregwu bọọlụ ama ama nwere agbụrụ Dutch Surinamese. Ọmụmaatụ ndị ama ama gụnyere Edgar Davids, Clarence Seedorf, na Patrick Kluivert.
Maapụ na-akọwa ebe nne na nna Ki-Jana Hoever si. Akụkọ ifo atọ a sitere na Surimane.
Ị maara?… Dị ka nke 2021, anyị maara ndị egwuregwu bọọlụ EPL atọ nwere nne na nna Suriname.
Ha gụnyere Georginio Wijnaldum, Ndị Spurs Steven Bergwijn na nke Liverpool Virgil van Dijk. Ugbu a, anyị hụrụ ihe mere nwa anyị nwoke na mbụ ji họrọ iso ndị Reds.
Ki-Jana Hoever Mmụta:
Ime ka nwa ha gaa ụlọ akwụkwọ bụ ihe kacha mkpa Marianne na Ivan Hoever. Na mbu, Ki-Jana gara Berlage Lyceum. Nke a bụ ụlọ akwụkwọ asụsụ abụọ na mpaghara Pieter Lodewijk Takstraat nke Amsterdam, Netherlands.
Mmụta Ki-Jana Hoever. Ọ gara Berlage Lyceum.
N'ihi ezigbo nzụlite nne na nna, Ki-Jana hụrụ nguzozi n'etiti agụmakwụkwọ na football. Mgbe oge ruru, akara aka na-akpọ.
Ki-Jana Hoever Football Akụkọ:
N'ịghọta ọchịchọ ya ịme egwuregwu dị ka ọrụ ya, Marianne na Ivan mere ihe niile iji kwado ọchịchọ ya. Dị ka ibe ya (Myron Boadu), Ki-Jana malitere na ndi ntorobịa na AZ Alkmaar.
N'ụlọ akwụkwọ ntorobịa AZ, ọ tọrọ ntọala ọrụ ya, ọbụnadị na -ebili ka ọ bụrụ nwa ha kacha ekwe nkwa. Egwuregwu Ki-Jana dọtara Ajax, onye rịọrọ nne na nna ya ka ha mee ka nwa ha sonyere ha.
N'iburu n'uche na agụmakwụkwọ dị mma ma dịkwa nso n'ụlọ ezinụlọ ya, Ki-Jana malitere iyi agba De Toekomst n'afọ 2014.
Nwatakịrị Ki-Jana Hoever na Ajax - na-ele anya mara mma.
Ndụ mbido na AFC Ajax Youth Academy:
Imezu atụmanya niile enyere ya ụzọ, Ki-Jana nwere mmalite ndụ na klọb ahụ nke ọma.
N'oge ahụ, a kọwara ya dị ka onye nwere ntụsara ahụ igwu egwu na etiti ọkara na aka nri. Ọ bụghị ichefu, nwa anyị nwoke bụkwa ọkachamara freekick.
Na Ajax, Ki-Jana Hoever na-egwu egwu Ryan gravenberch - ugbu a Paul Pogba-dị ka kpakpando. Ọ bụ nwata a na -atọ ụtọ nwere ike ịgba bọọlụ na -enweghị atụ nke mere ka ọ nwee ihe ịga nke ọma megide ndị na -emegide ya.
N'oge na -adịghị anya, njikwa nrapado Hoever na bọọlụ malitere ịdọrọ mmasị nke nnukwu klọb si mba ndị ọzọ, ọkachasị England. Ha gụnyere Man City, Chelsea, na Liverpool.
N'oge agụmakwụkwọ ya, ọ zụlitere echiche nke okenye. Ki-Jana nwere uche mepere emepe na-agbanwe echiche ya ka ọ bụrụ ihe dị mma.
Ọ chọsiri ike ịkwaga klọb ọ bụla nke ga -eme ka ọ too ngwa ngwa. Echiche dị otú ahụ mgbe ọ dị obere na -echegbu onwe ya nke ukwuu Ajax.
Ajax kwuputara egwu kacha njọ mgbe ha hụsịrị na enwere nnukwu asọmpi maka mbinye aka nke nwa ahụ. N'ezie, Liverpool, Manchester City, Man United, na Chelsea niile nwere anya ha na ọla ha dị oke ọnụ ahịa.
Ebe ọ bụ na Ki-Jana erubeghị afọ ịbịanye aka na nkwekọrịta ọkachamara na Dutch, iwu bụ na-enyere klọb ndị mba ọzọ ịbanye ya-ọbụlagodi ọnụ ala.
Ihe ghọrọ nnukwu egwu Ajax malitere ịpụta dị ka Liverpool na -alụ ọgụ siri ike ịbịakwute ezinụlọ nwata ahụ.
Ndị klọb England gara leta nne na nna Ki-Jana Hoever - n'ụlọ ha- ịchọ mbinye aka nwa ha nwoke. Ka oge na-aga, a kpọrọ Hoever na ezinụlọ ya ka ha gaa Merseyside, bụ ebe egosiri ha gburugburu akụrụngwa egwuregwu na klọb Kirkby (ụlọ akwụkwọ mmuta agụmakwụkwọ ha).
Mgbe Ivan na Marianne Hoever kwenyesiri ike, ụlọ ọrụ Merseyside bidoro nyefe ego na-ewe Ajax iwe. Ị maara?… Liverpool meriri asọmpi dị egwu iji banye na akara ngosi maka naanị £ 90,000. A kọọrọ Ajax na ọ ga-ewute ya nke ukwuu ka onye ọkpụkpọ hapụ ya, ọkachasị na ndị dị ọnụ ala.
Ki-Jana Hoever Biography - Roadzọ a ma ama Akụkọ:
Kpakpando Dutch na -arị elu gwụchara ịkwaga Liverpool na Ọgọstụ 2018 mana ọ ga -eche otu ọnwa maka mkpochapụ mba ofesi.
Ọnwa atọ ka e mesịrị, Hoever malitere ọzụzụ na ndị otu Liverpool mbụ. Jürgen Klopp kọwara ya dị ka “nwata nwoke nwere obi ike nke na-ewetara ya ọ joyụ.”
Ohere kasịnụ imere onwe ya aha bịara na 7th nke Jenụwarị 2019. A kpọrọ Ki-Jana maka egwuregwu FA Cup megide Wolverhampton Wanderers. Dị ka onye dochie anya, Ki-Jana Joever dochiri onye merụrụ ahụ Dejan Lovren na-emepe nkeji.
Omume magburu onwe ya mere Ki-Jana ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ Liverpool nke kachasị nta na iko FA. Ọbụna anya na-ama jijiji nke njikwa mmegide (Nuno Espirito-Santo) enweghị ike ijide - na mmasị Ki-Jana Hoever.
Nunu wutere na Ki-Jana. Ọ hụrụ n'anya na Klopp malitere mgba iji mee ka ọ nọrọ na Liverpool.
N'ịgbaso ọmarịcha arụmọrụ ya na Wolves, Klopp malitere igosipụta nnukwu onyonyo maka ndị na -eto eto Dutch. Nke ahụ bịakwara nnukwu ọrụ.
Ị maara?… E kenyere Ki-Jana Hoever ọrụ akara pụrụ iche Mohamed Salah n'oge ọzụzụ. Banyere ahụmịhe ahụ, ọ kwuru otu oge;
Trent Alexander-Arnold bụbu onye isi Nathaniel Clyne. Mmalite nke Ki-Jana mere ka ọ ghara inwe olileanya na ọ ga-abụ nhọrọ mbụ Liverpool ozugbo.
MGBE MGBE ECHICHE, KLOPP gwara m SADIO MANÉ, NA MOHAMED SALAH GA-AB O M OBI NA-EME.
MGBE M B YOUR YOU M NA-ECHI: EGO, NKE AH WORLD WORLDWA. O DI MERE KA M HỌRỌ MKA KA Ọ JIDE NA-EGWU.
ONYE Ọ B NLA NILE KA Ọ B THAT NA M AD SLGH AND AD THATGH THAT IHE NKE A NA-EME M Otutu Nkwenye. CHASAS SALAH NA MANE, M na-anwa ịhapụ ihe niile ha nyere m. UMUNNA M, VIRGIL NA GINI NILEkwara M OGO.
N'ihi ọsọ ya, nwa anyị nwoke rụrụ ọrụ dị mma. Mụ na Trent Alexander-Arnold adịrịlarị ya, ịrị elu mberede nke Ki-Jana Hoever dugara Nathaniel Clyne ịda na Liverpool.
Onye na-eto eto Dutch bụ onye kpatara onye aka nri England hapụrụ Reds.
Ki-Jana Hoever Bio - Akụkọ nke Ọma:
Afọ 2019 ghọrọ oge mgbanwe maka ọrụ Dutchman. N'ebe ọrụ Liverpool dị, ọ gara n'ihu isonye na U17 European Championships na Ireland.
Ki-Jana nyeere Netherlands aka imeri asọmpi a, nke ya na Italy gbara na ngwụcha.
Ọganihu Ki-Jana Hoever na mbido mba. 2019 UEFA European Under-17 Championship.
Mgbe mmeri ahụ gasịrị, a họpụtara ya n'etiti ndị otu egwuregwu. Laghachi Liverpool, Hoever nọgidere na-ebi ndụ ruo na mkpuchi nke gbara ya gburugburu. N'oge na-adịghị anya, kpakpando ahụ na-eto eto bịanyere aka na nkwekọrịta Reds ogologo oge.
Gị, ọ bụghị onye zuru oke, Ki-Jana Hoever nwere obi ụtọ ịhụ ka aha ya dị n'etiti ndepụta nke akụkọ mgbe ochie ndị meriri nnukwu mmeri ha n'afọ iri.
Naanị ọnwa abụọ ka ọ bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta Liverpool, onye agbachitere dị nkọ malitere ịrị elu. Mgbe ọ dị afọ 17, ọnwa asatọ, na ụbọchị iri, Ki-Jana Hoever ghọrọ onye ọkpụkpọ nke anọ kacha gbata akara maka Liverpool, n'azụ Ben Woodburn, Michael Owen na Jordan Rossiter.
Naanị mgbe o nwetasịrị nsọpụrụ ahụ, otu onye na-enwe mmasị ochie megharịrị mmasị ya n'ebe ọ nọ. Ikike Hoever nwere ịgụ egwuregwu ahụ, ike ikuku ya, ọsọ ya na ịdị jụụ ya mere Nuno Espirito-Santo debere ya ka ọ bụrụ ihe kacha mkpa nyefe.
Na-esochi ọpụpụ Matt Doherty na Spurs, Ki-Jana Hoever kwagara Molineux. N'aka nke ọzọ, Liverpool banyere Wolves ' Diogo Jota. Ndị na-eto eto Dutch jidere ọnụ ọgụgụ Doherty abụọ.
N'oge edere Ki-Jana Hoever's Biography, ọ gbanweela ndụ ọhụrụ n'obodo Wolverhampton.
N'ikwu nke a, ọ na -egosi onwe ya dịka nnukwu asọmpi maka Nelson Semedo. Nkwupụta Ki-Jana mgbe ọ banyere na klọb na-agwa ọtụtụ ihe banyere nnukwu ebumnuche ya.
Maka ọtụtụ ndị Fans, ọ bụ naanị oge tupu ọ ghọọ Wolves na nhọrọ mbụ nke nhọrọ nke Netherland. Karịsịa, ndị kachasị mma aka azụ n'ụwa. Ihe ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, banyere Hoever's Bio bụ akụkọ ihe mere eme.
Banyere Nwanyị Nwanyị Ki-Jana Hoever na:
Nke mbu na ihe mbu, agagh agọnari na onye di nma ka Ki-Jana kwesiri inwe di. N'azụ ezigbo onye na-agbachitere Dutch, enwere enyi nwanyị mara mma. Ki-Jana abanyela nke ọma na onye hụrụ ya n'anya.
Zute Nwa-nwanyi Ki-Jana Hoever. Abụọ ndị a bụ naanị dakọtara maka eachother.
Hoever na Enyi ya nwanyị malitere ịlụ dị ka ndị hụrụ nwata n'anya. Ha abụọ achọwo ngọzi mmekọrịta site na nne na nna ha, bụ ndị kwenyere na ha bi.
Enyi enyi Ki-Jana Hoever bụ onye na-achọghị ọdịmma onwe ya naanị nke na-eme ihe ọ bụla karịa inye nkwado nwoke.
Ọ na -eme nke ahụ ọbụlagodi na ọ pụtara itinye ndụ ya na ọrụ ya na njide. Ha abụọ nwere mmasị ileta ebe ezumike osimiri.
Nke a bụ ụzọ besy ha na-ekpori ndụ.
Ikpe ikpe site na otu ha abụọ si enwe mmekọrịta ha, anyị ji n'aka otu ihe. Nkwupụta na agbamakwụkwọ ga-abụ usoro iwu ha ọzọ.
Ki-Jana Hoever Ndụ Nke Onwe:
N'ịbụ onye na-abụghị ezigbo ọsọ-azụ, ịmara àgwà ya n'èzí football ga-enyere gị aka ịmatakwu ya. Ugbu a ajụjụ… isnye bụ Ki-Jana Hoever?
Ndụ nke Ki-Jana Hoever nke Onwe - GWARA.
Nke mbụ, ọ nwere n'etiti Capricorn Zodiac. Ihe niile gbasara Ki-Jana na-anọchite anya oge na ibu ọrụ.
Onye egwuregwu bọọlụ Dutch nwere ọnọdụ nnwere onwe dị n'ime nke na -enyere ya aka ịme mkpebi dị mma na ọganihu na ọrụ ya na ndụ onwe ya.
Dị ka achọpụtara na akụkọ ndụ ya, Ki-Jana malitere ikwenye na mbufe mba ofesi mgbe ọ dị afọ 16.
Ị bụ onye na -enweghị ndidi, mgbe ụfọdụ ọ na -achọ mgbanwe nke gburugburu. Site n'enyemaka ndị nne na nna na ndị ezinụlọ ndị ọzọ, ọ meela mkpebi siri ike na ezi uche.
Sense nke ọchị:
Ekwela ka a ghọgbuo gị ka ọ na -adịkarị njọ na pitch - na ihu ahụ siri ike. Ki-Jana bụ ezigbo mmadụ nwere ihu ọchị.
Anyị matara na mgbe ọ kpọọrọ ndị njem na njem tupu Netherlands 2019 FIFA U-17 World Cup Round of 16 megide Nigeria.
Ki-Jana Hoever Ndụ:
Anyị niile maara eziokwu ahụ bụ na ọ dị nwayọ ma nwee ndidi. Ma ọ bụghị ya, Ki-Jana gaara anọ na Ajax na Liverpool. N'ebe a, anyị ga-agwa gị banyere ụdị ndụ ya.
Banyere ụlọ ya:
N'agbanyeghị ọtụtụ puku paụnd batara n'akpa ya, Ki-Jana biri n'otu oge dị ndụ n'ụlọ ya dị obere.
Foto dị n'okpuru na -achịkọta otu o si ahụ ndụ - dịka nwata nwoke dị umeala n'obi. Ki-Jana na enyi nwanyị ya na-ekerịta ihe yiri obere ụlọ.
Kilọ Ki-Jana Hoever na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ụdị ndụ ya.
Ọ nwere Car?
N'ihi ezigbo nzụlite, Ki na-adị umeala n'obi ma nwee ala. Ọ na-eche na ọ chọghị ụgbọ ala n'oge ndụ ya. Nwa anyị nwoke ga-aga ije ma ọ bụ were igwe kwụ otu ebe gaa ọzụzụ.
Ki-Jana Hoever bụ nwata dị umeala n'obi nke na-ebi ndụ dị mfe.
Ki-Jana Hoever Ndụ Ezinaụlọ:
Onye agbachitere amụrụ Amsterdam dabere na nne na nna ya maka mkpebi dị mkpa ọ na-eme gbasara ọrụ ya. Eziokwu bụ, Ki-Jana na-ahụ ha dịka otu n'ime ngọzi kasịnụ nke ndụ. Nkebi nke a na -eweta ọtụtụ ozi gbasara ha.
Banyere nne na nna Ki-Jana Hoever:
Dị ka ọtụtụ ndị nne na nna ndị ọzọ, ọ dịrịghị Ivan na Marianne mfe ịhụ ka nwa ha na -akwaga na Liverpool dị obere.
Mgbe ọ na-abịa England mgbe ọ dị afọ 16, nne na nna Ki-Jana Hoever kpọbatara ya ezinụlọ ndị ọbịa. Nwatakịrị ahụ jikọtara nke ọma, egwu nke nyeere ya aka ịmụta omenala ndị Britain. Ọzọkwa, nwa anyị nwoke mụtara ka esi erikwu anụ ezi na akwa.
Marianne na Ivan na-eleta Ki-Jana mgbe ngwụsị izu-belụsọ n'oge Corona. N'oge ahụ siri ike, nne Hover hụrụ na nwa ya nwoke nwetara nkuzi esi nri karịa Pasta, ọkacha mmasị ya. Onye na -eto eto kwuru otu oge;
N’oge gara aga, M na-eri nri na klọb mgbe ndị mụrụ m na nwa agbọghọ m na-anọghị gburugburu. MGBE MGBE EBU, M KWERE Oge iji jiri ndụ.
Ahụmahụ papa na mama m nwere na mbido ya:
Na 7th nke Jenụwarị, Ji-Jana mere Liverpool mbụ ya ka ọ dị afọ 16. Ndị mụrụ ya si na Amsterdam lee ya anya. N'adịghị ka atụmanya ha, ha nwere olile anya ịhụ ya n'ọhịa n'ime nkeji ikpeazụ.
N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ wụrụ ha akpata oyi n'ahụ ịhụ ka ọ dejupụtara Dejan Lovren merụrụ ahụ na nkeji 6 nke egwuregwu ahụ. N'okwu enyi ezinụlọ;
NNA KI-JANA MARIANNE NA-EGO.
Ivan IV nna ya, nke ahụ bụ nke kachasi ike nkeji nke iri asatọ nke ndụ ya. Ọ D SO N’ BT B BT B N’IHI NA KI KWURU NA EGWUREGWU N’ENTLỌ ANDB AND.
NA-EGO, Nwata nwoke ahụ mere nke ọma, LIVERPOOL BURkwara ọsọ egwuregwu ahụ.
Nwatakịrị chọrọ maka papa ya na mama ya:
Mgbe ọ bụ nwata, Ki-Jana kwere nkwa-na mgbe ọ ghọrọ ọkachamara, ọ ga-ahụ na nne na nna ya agaghịzi arụ ọrụ.
Ugbu a ọ bịarutere ebe ahụ, Ivan na Marianne na -ekwusi ike mgbe niile na ha ga -arụ ọrụ. Mgbe ọ lara ezumike nká na egwuregwu ahụ, Ki-Jana nwere olile anya isonyere ha na Amsterdam.
Ki-Jana Hoever Eziokwu:
N'ebe a, anyị ga-agwa gị ihe ndị ọzọ ịmaghị banyere Ki-Jana Hoever. Ọ bụ mmechi ngalaba nke Biography nke Dutch Dutch ngwa ngwa.
Eziokwu # 1 - O nwere ọmarịcha abụ sitere na Wolves Fan:
Ndị na -akwado bọọlụ Britain na -ebutekarị Nọmba nke mbụ ma a bịa n'ịkpọ abụ kacha mara amara site n'aka ndị na -akwado ya. Ndị na-akwado Wolves emeela otu maka Ki-Jana Hoever.
O nwere aha - 'Ki bu Dutchie n’akuku aka nri anyị'. Lee abụ a;
Eziokwu # 2 - Pụtara nke igbu egbugbu Ki-Jana Hoever:
Nka ahụ ya na -akọ akụkọ ya. Na ogwe aka ekpe Ki-Jana na-ejide egbugbu, nke gụnyere ndị a. Nke mbụ, aha nne na nna ya. Nke abụọ, ụbọchị nne nne ya nwụrụ.
Eziokwu # 3 - Ego ole ọ na - eme na sekọnd ọ bụla:
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Ki-Jana Hoever's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Wolves rygwọ ọnwa rygwọ (£)
Kwa Afọ: £ 2,100,000
Ọnwa kwa: £ 175,000
Kwa Izu: £ 40,322
Kwa :bọchị: £ 5,760
Kwa elekere: £ 240
Nkeji ọ bụla: £ 4
Sekọnd ọ bụla: £ 0.07
Ebe Ki-Jana Hoever si abịa, nwa amaala Dutch nke na-enweta euro 36,500 kwa afọ ga-achọ afọ 67 iji nweta ihe ndị ịgba ọsọ na afọ na Wolves.
Eziokwu # 4 - Ọdịnihu nke FIFA:
Y’oburu n’achọ iwulite ndi agha n’elu FIFA kacha mma ndi n’eto eto, anyi kwadoro kpakpando dika Ki-Jana na Joshua Zirktsee.
Boysmụ nwoke ndị a ga -enyere aka gbanwee ndị otu gị. Ekwela ka ọkwa Ki nwere ugbu a na ike ya duhie gị, n'ihi na ọ bụ ụzọ karịa nke ahụ mgbe ị na -eji ya n'ọhịa.
Nke a bụ ihe akaebe nke ule FIFA nke Ji-Jana Hoever nke ga - eme ka ị ghọta na ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma zoro ezo maka azụ azụ. Lee, vidiyo nke njem ya site na nwata ụjọ na-atụ ụjọ na nnukwu ụlọ.
Eziokwu # 5 - Ki-Jana Hoever's Religion:
Okpukpe Suriname, ebe ezinụlọ ya si, bụ Iso Christianityzọ Kraịst. Ki-Jana sonyeere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị Dutch Dutch Surinamese. Amụrụ gị n'ụlọ ndị otu Kristi, ndị egwuregwu bọọlụ anaghị egosipụta nkwenkwe okpukpe ya n'ihu ọha.
Eziokwu # 6 - Onye nnọchi anya Ki-Jana Hoever:
Dabere na TransferMarket, SEG - Group Entertainment Group na -elekọta akụkụ niile nke ọrụ Ki. Ha na -eme nke a mere na -enye ya ohere itinye uche n'ịgba bọl.
N'ụzọ na -akpali mmasị, ụfọdụ ndị ahịa kacha nwee ụlọ ọrụ ahụ bụ Depf Depad na Memphis, Ndị na-agba ọsọ Danish - Kasper Dolberg, na Promin Quincy.
Nchịkọta akụkọ ndụ:
Iji nyere aka na nchịkọta ngwangwa nke Memoir ya, anyị kwadebere Wiki anyị maka oriri gị.
Ihe omuma nke ndu
Aha zuru ezu: Ki-Jana Delano Hoever
aha otutu: Ki
Age: 19 afọ na ọnwa 10.
Ụbọchị ọmụmụ: Ụbọchị 18th nke January 2002
Ebe amụrụ onye: Amsterdam, Netherlands
Ndị nne na nna: Marianne Hoever (Nne) na Ivan Hoever (Nna)
Nwanne: Onweghi Nwanne ma obu Nwanne
Ezinụlọ Ezinụlọ: Suriname, mba dị na South America.
Nationality: Netherlands na Suriname.
Onye nnọchite anya: SEG - Otu Ntụrụndụ Egwuregwu
Ezigbo Net: 2 nde Pound (2021 stats)
elu: 1.83 mita ma ọ bụ 6 ụkwụ 0 sentimita asatọ
Education: Schoollọ akwụkwọ Berlage Lyceum
Ezi Playgba egwu: N’etiti-azụ na azụ-azụ
Mmụta gara: AZ, FC Utrecht na Liverpool
Nwatakịrị nwoke nke bidoro gbaa bọọlụ n’ebumnuche nke ịbụ onye pro agaghị enwe ihe ịga nke ọma n’enweghị oké ọchịchọ. Ki-Jana - dị ka Ademola Lookman - nwere nnukwu ọchịchọ mgbe niile ịka nka.
O meela ka ọ nweta ọganihu dị ukwuu na ndụ ọkachamara ya. Onye egwuregwu bọọlụ Dutch arụpụtala ọtụtụ ihe na ọrụ ya n'agbanyeghị na ọ dị obere - amụrụ na 2002.
Akụkọ ndụ anyị nke Ki-Jana Hoever na-eme otu ihe. Na anyị kwesịrị inwe oke agụụ ma ọ bụ agụụ siri ike imezu ihe.
Karịsịa, ọ bụrụ na anyị na -atụ egwu ime mgbanwe, anyị na -eche ihe egwu nke oke amamịghe ihu. Mmegharị Ki si Ajax, Liverpool, wee ruo Wolves na -egosi ụzọ enweghị atụ ya iji chọọ uto.
Ọ kwesịrị ka Lifebogger jaa ndị mụrụ ya mma - Marianne na Ivan. Ha bụ nnukwu mmetụta na mmepe ọrụ Ki. Ọ bụghị ichefu nne nne ya, onye anyị kwenyere na ọ na -ekerekwa òkè na nwata obi ụtọ ya.
Daalụ maka iwepụta oge iji gwuo Bio anyị na Ki-Jana Hoever. Na Lifebogger, anyị na -agba mbọ maka izi ezi n'inye akụkọ gbasara Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch.
Jiri nwayọ mee ka anyị mara (kọwaa ma ọ bụ site na kọntaktị) ma ọ bụrụ na ịhụ ihe na-adịghị mma na Akụkọ Ki-Jana Hoever anyị.